‘लोकतान्त्रिक अभ्यासका नाममा विग्रह स्वीकार्य हुँदैन’ – Nepal Press
२०७८ मंसिर ७ गते ८:५८
नेकपा एमालेको आधार इलाकाको रुपमा रहेको क्षेत्र हो लुम्बिनी । लुम्बिनी उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली, उपमहासचिव विष्णु पौडेल र घनश्याम भुसाल, सचिव प्रदीप ज्ञवाली र गोकर्ण विष्ट, प्रभावशाली नेताहरु शंकर पोखरेल, टोपबहादुर रायमाझी, मणि थापा, छविलाल विश्वकर्मा, राधा ज्ञवाली, खिमलाल भट्टराई, ठाकुर गैरेलगायतको प्रदेश हो । चितवनमा हुन गइरहेको पार्टीको १०औं महाधिवेशनमा लुम्बिनीको तयारी, यहाँबाट हुने सहभागिता, नेताहरुको व्यवस्थापनलगायतका विषयमा नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष लिला गिरीसँग कुराकानी:-
महाधिवेशनको तयारी कस्ताे छ ?
एमालेलाई सुदृढ बनाउन ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बनाउने हाम्रो अभियानलाई साकार बनाउन एमाले दह्रो र सुदृढ हुनुपर्छ । महाधिवेशनले सोही अनुरुपको नेतृत्व छान्नेछ । विचारमा अझ सुदृढ बनाउनेछ । विचारमा एकरुपता भएन भने त्यो पार्टीले केही गर्न सक्दैन भन्ने हामीले बुझेका छौं ।
हामीले राजनीतिक क्रान्ति सम्पन्न गर्‍यौं, सामन्तवादलाई ढाल्यौं तर त्यसका अवशेशहरु कायमै छन् भन्ने कुरा भुल्नु हुँदैन । सामन्तवादका अवशेष अन्त्य गर्ने र दलाल पुँजीवादका विरुद्धमा जारी संघषलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने छ ।
हामीले लुम्बिनीबाट ७५ हजार सहभागिता गराउने छाैं । घरघरमा महाधिवेशनको सन्देश दिनेगरी योजना बनाएर अगाडि बढेका छौं ।
राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने, समाजवादको आधार निर्माण गर्ने हाम्रो लक्ष्य हो । हामी यो कुरा भन्छौं र सोही अनुरुपका काम गर्छौं । यसरी अगाडि जाँदा हामी सरकारमा रहँदा पनि र नरहँदा पनि नीति, विचार, योजना निर्माण गर्नेगरी आफूलाई लैजानुपर्छ । एमालेमा यो तागत छ, क्षमता छ र सम्भावना पनि छ ।
लुम्बिनी एमालेको आधार इलाका भएको र यहाँबाट मुख्य पदाधिकारीलगायतका महत्वपूर्ण पदमा नेताहरुको उपस्थितिले आगामी दिनमा नेतृत्वलाई थप सबल र सुदृण बनाउने छ । हामीले लुम्बिनीबाट ७५ हजार सहभागिता गराउने छाैं । घरघरमा महाधिवेशनको सन्देश दिनेगरी योजना बनाएर अगाडि बढेका छौं ।
महाधिवेशनले एमाले कार्यकर्तालाई कस्तो सन्देश दिनेछ ?
‘दक्षिणपन्थी अवसरवाद र संगठनात्मक अराजकताको विरोध गरौं, जबजको मार्गदर्शनमा समाजवादको आधार निर्माण गरौं’ हामीले महाधिवेशनमा यो नारा तय गरेका छौं । समृद्ध नेपाल खुशी जनताको राष्ट्रिय लक्ष्यमा केन्द्रित हुनका लागि पार्टीलाई आगामी दिनमा यहीँ नाराले नै निर्देशित गर्नेछ ।
समृद्धिका आधार तयार पार्ने र तिनलाई साकार पार्दै जाँदा नै समाजवादको आधार निर्माण हुने हो । समाजवादमा जाने भनियो तर त्यसका लागि आवश्यक नीति र कार्यक्रम बनाउन सकिएन भने त्यसको केही अर्थ रहँदैन । तर, एमालेले यसको प्रष्ट नीति बनाएको छ, उपयुक्त कार्यक्रम तय गरेको छ र अब महाधिवेशनमार्फत योग्य नेतृत्व छनौट गरेर अगाडि बढ्ने छ ।
भनेपछि अब अधिकारप्राप्तिको आन्दोलन जरुरी छैन ?
राजनीतिक अधिकार प्राप्तिको लडाइँ मुख्य कुरा होइन । संविधान र कानूनमा त्यसलाई निश्चित गरिसकिएको छ । अब राजनीतिक अधिकार प्राप्तिको लडाइँको कुरा गर्नुको अर्थ छैन । अब कोही मान्छे मारिँदैन, निर्वासित हुँदैन, भूमिगत हुनु पर्दैन । अर्थात् त्यो पहिलो पुस्ताको चरण भनेको राजनीतिक अधिकार प्राप्तिको लडाइँ गर्ने पार्टी वा व्यक्ति नेता बन्ने । तर यो कुराको ग्यारेण्टी भएपछि त्यो विषय सकियो ।
अबको एजेण्डा भनेको आर्थिक विकास र समृद्धि हो । देश धनी हुनुपर्छ, जनता सुखी हुनुपर्छ । अब त्यो पार्टीले मात्र मुलुकलाई नेतृत्व गर्न सक्षम हुन्छ, जसले आर्थिक समृद्धि र विकासको योजना ल्याउँछ । उत्पादनका क्षेत्रहरुलाई सक्रिय बनाउनुपर्ने छ ।
दोस्रो, नेपाली समाज विविधतायुक्त छ । बहुजात, बहुभाषा, बहुधर्म, बहुसंस्कृति, भौगोलिक विविधताले युक्त छ । यस्तो विशिष्टता भएको यो देश, हाम्रो नेपाली समाजको प्रतिबिम्ब हुनुपर्छ राज्य सञ्चालनमा । राज्य सञ्चालनका अंगहरुमा समाजको विविधता झल्कनुपर्छ । त्यसको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ । यो कुराको लागि नेतृत्व गर्ने पार्टी र व्यक्ति नेता बन्ने हो । यो विषय पनि संविधान र कानूनबाट टुंगियो ।
आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रबद्र्धनका कार्यक्रममा हाम्रो राज्यको ध्यान जानुपर्ने छ । हामीले मान्छेको जीवनसँग गाँसिएको मुद्दा उठाएका छौं । सत्तामा रहँदा सोही मुद्दालाई लागू गर्न उपयुक्त कार्यक्रम बनाएका छौं भने बाहिर रहँदा रचनात्मक काममै केन्द्रित छौं ।
मानिसको जीवनसँग गाँसिएको खास मुद्दा भनेकै आर्थिक विकास र समृद्धि हो । यो खाली नेताहरुले भाषण गर्ने, नारा लगाउने, दस्तावेजहरुमा लेख्ने कुरा मात्र होइन भनेर हामीले सिद्द गर्नुपर्ने छ ।
आर्थिक विकास र समृद्धि नै अबको एजेण्डा हो ?
हामीले समृद्ध नेपाल सुखी जनताको संकल्प गर्दै त्यसै लक्ष्यमा पुग्न योजनाबद्ध कामको थालनी गरेका हौं । स्थानीय पालिकामा होस् कि प्रादेशिक तहमा होस् वा संघीय तहमा हामीले अगाडि सारेका योजनाहरु राष्ट्रिय संकल्प साकार पार्नमा केन्द्रित छन् ।
पार्टी सत्तामा रहेका बेलामा के के काम गर्न सक्यो, कस्ता योजना तय गर्न सक्यो, समृद्धिको आधारहरु कसरी पहिचान गर्न सक्यो भन्ने कुराको सबै फेहरिस्त जनताका सामुन्ने लैजाने छौं ।
कामका लागि विदेशिनुपर्ने, दक्ष कामदार विदेशबाट मगाउनुपर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था छ । यसलाई अन्त्य गर्नुपर्ने छ । पार्टीहरुका अगाडि अनेकौं चुनौतीहरु छन् । ती चुनौतीलाई प्राथमिकीकरण गरेर समाधान गर्नुपर्ने छ ।
आर्थिक विकास र समृद्धिका सन्दर्भमा हाम्रो पार्टीले अगाडि सार्ने नीति र त्यसको कार्यान्वयनका चरणहरुले समृद्धिको आधारलाई साकार पार्नसक्ने छ । महाधिवेशनबाट छानिने नेतृत्वको एउटा प्रमुख कार्यभार यो पनि हुनेछ । कृषि, पर्यटन, उद्योगका क्षेत्रमा हामीले केकस्ता कार्य गर्न सक्यौं, अब कस्तो नीति बनाउन सक्छौं भन्ने कुरामा पनि नेतृत्वको ध्यान जानुपर्ने छ । समृद्धिका लागि कृषि हाम्रो मूल आधार हो भने, कृषिमा, भूमिव्यवस्थामा हाम्रो नीति के हो ? उद्योग, पर्यटन, जलस्रोतमा, वाणिज्यका विषयमा हामीले के गर्छौँ ? यी विषयलाई पार्टी नेतृत्वले ध्यान दिनुपर्ने छ ।
प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्व छनोट होला कि सर्वसम्मत ?
पार्टीलाई नेतृत्व गरिसकेका कतिपय नेताहरुबाटै विग्रह ल्याउने काम भयो । नवौं महाधिवेशनमा माथिदेखि तलसम्म प्यानल बनाएका कारणले विभाजनको आधार बन्न गएको हो । लोकतान्त्रिक अभ्यासका नाममा विग्रह स्वीकार्य छैन ।
एमालेको विगतको यात्रा फर्केर हेर्दा, कतिपय बेलामा आफ्नो मौलिक अडान अलिक कमजोर भएको, जता पनि लपक्क भएको टिप्पणी पनि आए । एमालेका सबै नेता कार्यकर्ता जनस्तरबाट आएका यी टिप्पणीमा ध्यान दिनुपर्छ । अहिले एमालेलाई त्यस्तो आरोप लाग्दैन ।
लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्नुपर्छ भन्ने तर त्यसको परिणामलाई स्वीकार गर्न नसक्ने संस्कार बोकिरहेको हाम्रो स्थिति थियो । लोकतान्त्रिक अभ्यासका नाममा भएका विसंगतिपूर्ण कामले एमालेभित्र गुटबन्दीलाई स्थापित गरेको तितो विगतबाट पाठ सिक्दै यो महाधिवेशनबाट नयाँ सन्देश दिनेछौं ।
लोकतान्त्रिक भनेको प्रतिपस्पर्धा गर्ने, चुनावमा उठ्ने, बाकस थाप्ने, एउटाले जित्ने, अर्कोले हार्ने भन्ने मात्र होइन । तर, सम्मान, सहमतिबाट नेतृत्व चयन भयो भने पनि त्यसलाई अलोकतान्त्रिक भन्न मिल्दैन ।
अर्को समावेशीको कुरा पनि उठ्ने गर्छ । नेपालका प्रमुख पार्टी हौं भन्नेहरुको केन्द्र र जिल्ला तहसम्मको नेतृत्व चार्ट बनाएर हेरौं न । एमाले र अरु पार्टीको समावेशिताको चित्र देखाइदिऔँ न ।
हामी कुनै पनि राजनीतिक पार्टीभन्दा समाजको यो विविधतालाई नेतृत्वमा उन्नत ढंगले प्रयोग प्रतिनिधित्व गरेका छौं । कम्युनिस्ट पार्टी भनेको विचारबाट निर्देशित हुनुपर्छ, समावेशिताका नााममा उपभोक्ता समिति जस्तो बनाउने होइन भन्ने कुरा पनि केही कोणबाट आउने गर्छ, तर समाजको विविधतालाई हाम्रो नेतृत्वमा उचित ढंगले प्रयोग गरिएको हुन्छ । सुदृढ र जनताको प्यारो पार्टीका रुपमा रहेको एमालेले सबैखाले विग्रहलाई चिरेर अगाडि बढ्नेछ ।
लुम्बिनी एमालेको आधार इलाका भन्नुहुन्छ । के छ त्यसको आधार ? कसरी मापन गर्न सकिन्छ ?
एमालेको शीर्ष नेतृत्वमा यहाँको सशक्त उपस्थिति छ । अहिले पनि पार्टीबाट एउटा समूह बाहिर जाँदा यहाँका अधिकांश एमालेका साथीहरु सतिसालझै खडा भएर विभाजन गर्न खोज्नेलाई निराश बनाइदिनुभयो, जनप्रतिनिधि रहनुभएका कमरेडहरु पनि अधिकांश एमालेमै हुनहुन्छ र पार्टी सदस्यका हिसाबले पनि यहाँको उपस्थिति निकै बलियो छ । प्रदेशसभामा पनि सबै दल एकातिर हुँदा पनि एमाले बराबरीको हाराहारीमा छ । यही प्रमाणले यो एमालेको आधार इलाका हो ।
नयाँ नेतृत्वको लागि लुम्बिनीको सहभागिता कस्तो हुन्छ ?
अहिलेको नेतृत्वमा पनि यहाँबाट उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली, उपमहासचिव विष्णु पौडेल र घनश्याम भुसाल, सचिव प्रदीप ज्ञवाली र गोकर्ण विष्ट, प्रभावशाली नेताहरु शंकर पोखरेल, टोपबहादुर रायमाझी, मणि थापा, छविलाल विश्वकर्मा स्थायी कमिटीमा हुनुहुन्छ ।
केन्द्रीय सदस्य तथा अन्य विभिन्न विभागमा यहाँबाट सशक्त उपस्थिति छ । त्यसैगरी नयाँ आकांक्षी पनि उत्तिकै संख्यामा हुनुहुन्छ । अहिले रहनुभएका कमरेडहरु र केही नयाँ थपिएर सकेसम्म सर्वसम्मतिमै नेतृत्व छनौट गर्ने सबैको प्रयास छ ।
जहाँसम्म मेरो कुरा छ अब मेरो उमेरले पनि एक कार्यकालभन्दा बढी रहन दिँदैन त्यही कारणले पनि एकपटकका लागि पुनः केन्द्रीय सदस्य दोहोर्उने आशामा छु, हेरौं प्रदेशको विशेष जिम्मेवारी पनि भएकाले नेताहरुको सहमतिमै अगाडि बढ्नेछु ।
#लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष
प्रकाशित: २०७८ मंसिर ७ गते ८:५८